Somaliland Kama Aqbalayso Turkiga Mucaawino Laga Soo Ansixiyay Muqdisho iyo Markab Calanka Somalia lagu soo Dhejiyay.‏ | Burco Media
Somaliland Kama Aqbalayso Turkiga Mucaawino Laga Soo Ansixiyay Muqdisho iyo Markab Calanka Somalia lagu soo Dhejiyay.‏
Waa Wax laga xumaado inay Xukumada Somaliland ogolaato Mucaawino laga soo saxeexay Muqdisho oo ah mid siyaasadaysan. waxan leeyayahay Turkigu maaha Wadan Dhexdhexaad ka ah Arrimaha Somaliland iyo Somalia. waxa la sheegay inuu Markabkani wato Calanka Somalia oo lagaga soo dhejiyaya Magaalada Muqdisho. iyada oo la sheegay in ogolaanshaha uu ka soo qaatay Muqdisho. sidaas darteed waxan ka codsanaynaa Madaxweynaha Somaliland inuu Markabkaas shirqoolka wata uu dib ugu celiyo Dawlada Turkiga madaama ay arrimaha Somaliland kala macaamilayso Dawlada Maqaar Saarka ah ee Somalia.
Marnaba ma aqbalayno hadaanu nahay Shacabka Somaliland in Markab shirqool ah oo laga soo muaamaradeeyay Muqdishu in maanta la yidhaa Markab Mucaawino ah ayaan Muqdishu uga dirnay Somaliland. waa wax laga naxo in aan noqono bakhti cuna loo keeno wax laga soo ansixiyay Muqdisho. Somaliland way isku filan tahay umana baahna mucaawino laga soo ansixiyay Muqdisho, Haday Turkiga ka daacad ka tahay oo wax caawinayo waa inuu Maal-gelinta uu siinayo Somaliland iyo Somalia uu cadaalad ugu qaybiyaa. ma haboona inuu Turkigu maanta yidhaa Mucaawiino uu ku dheehan yahay shirqool inuu Somaliland u soo diro.
Turkigu wuxuu Somaliland ula dhaqmayaa Madaxa tus waxna ha u qaban haduu rabo inuu Somaliland caawinayo, waa inuu maal-gashi ku sameeyaa Somaliland sida uu maal-gashiga baaxada leh uga wado Somalia. Xukumadu waa inay si cilmiyaysan ula xisaabtantaa Dawlada Turkiga. waxan oganahay inuu Markabkii hore ee Turkigu keenay uu shacabkeena ka dhex abuuray khilaaf iyo dhibaato badan oo runtii aan loo baahnayn.
Somaliland waxay u baahan tahay Horumar balse uma baahna Mucaawino Shirqool la socdo oo lagu kala qaybinayo Bulshada Somaliland. Markii ay Shacabka Somaliland ay silcayeen umuu damqan balse maanta oo ay Somaliland horumar gaadhay inuu caano boodhe u keeno waa wax laga xumaado. Somaliland sharafteeda iyo Qadiyadeeda ma siisanayso daasado caano boodhe ah.